शीर्षकमा बाइबल पदहरू: खराब -> थप
१ कोरिन्थी 13:6
प्रेम खराबीमा प्रसन्‍न हुँदैन, तर ठीक कुरामा रमाउँछ।
१ यूहन्ना 5:19
हामी जान्‍दछौं, हामी परमेश्‍वरका हौं, र सारा संसार त्‍यस दुष्‍टको अधीनमा परेको छ।
१ राजा 14:9
तँभन्‍दा अघि बाँचेकाहरू सबैभन्‍दा अझ बढ़ी तैंले दुष्‍ट काम गरेको छस्‌। तैंले आफ्‍नो निम्‍ति अरू देवताहरू, ढालेर बनाएका धातुका मूर्तिहरू बनाएर तैंले मलाई रीस उठाएको छस्‌ र मलाई तेरो पीठपछि राखेको छस्‌।
१ राजा १७:१३
एलियाले त्‍यसलाई भने, “नडराऊ, घर गएर तिमीले भनेझैँ गर। तर पहिले तिमीसित जे छ त्‍यसको एउटा सानो रोटी बनाएर मकहाँ ल्‍याऊ, र त्‍यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्‍ति केही बनाऊ।
१ पत्रुस ३:९
खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा अपमानको बदला अपमान नगर्ने, बरु त्‍यसको सट्टामा आशिष्‌ दिने होओ, किनकि यसैको लागि तिमीहरू बोलाइएका छौ, कि तिमीहरूले आशिष्‌ प्राप्‍त गर्न सक।
१ शमूएल १२:२०
शमूएलले मानिसहरूलाई भने, “नडराओ। तिमीहरू यस्‍ता दुष्‍ट भए तापनि परमप्रभुको आराधना गर्न नछोड़, तर आफ्‍नो पूरा हृदयले उहाँको सेवा गर।
१ शमूएल १५:२३
उहाँको आज्ञा उल्‍लङ्घन गर्नु तन्‍त्रमन्‍त्रको पापजस्‍तै हो, र हठी हुनु मूर्तिपूजा गर्नुजस्‍तै खराब हो। तपाईंले परमप्रभुको वचनलाई त्‍याग्‍नुभयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईंलाई राजाको पददेखि त्‍याग्‍नुभएको छ।”
१ थिस्सलोनिकी ५:२२
सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस।
२ इतिहास २९:६
हाम्रा पुर्खाहरू त विश्‍वासघाती भएर परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरको दृष्‍टिमा जे कुरो खराब थियो त्‍यही नै तिनीहरूले गरे। तिनीहरूले उहाँलाई त्‍यागे र उहाँका बासस्‍थानको केही वास्‍तै गरेनन्‌। तिनीहरूले त उहाँतिर आफ्‍ना पीठ फर्काए।
२ तिमोथी २:२२
यसकारण जवानीका अभिलाषाहरू त्‍याग, र शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूका साथसाथै धार्मिकता, विश्‍वास, प्रेम र शान्‍तिको लक्ष्य राख।
धिक्‍कार तिनीहरूलाई, जसले खराबलाई असल र असललाई खराब भन्‍दछन्, जसले अँध्‍यारोलाई उज्‍यालो र उज्‍यालोलाई अँध्‍यारो मान्‍दछन्‌ अनि तीतोलाई मीठो र मीठोलाई तीतोको निम्‍ति लिन्‍छन्‌।
किनकि मूर्ख मानिसले मूर्खताकै कुरा गर्छ, र त्‍यसको मन दुष्‍ट काममा व्‍यस्‍त रहन्‍छ, त्‍यसले अधार्मिक काम गर्छ र परमप्रभुको विषयमा गलत कुरो फैलाउँछ। त्‍यसले भोकाएकाहरूलाई रित्तै पठाउँछ, र तिर्खाउनेहरूका निम्‍ति पानी नै दिँदैन।
किनभने दुष्‍ट काम गर्ने हरेकले ज्‍योतिलाई घृणा गर्छ, र ज्‍योतिमा आउँदैन, नत्रता त्‍यसका काम प्रकट हुनेछन्‌।
तर ती न्‍यायकर्ता मर्ने बित्तिकै तिनीहरू आफ्‍ना पुर्खाहरूभन्‍दा पनि अझ बढ्‌ता भ्रष्‍टाचारमा पर्दथे, र अरू देवताहरूलाई पुज्‍दै र उनीहरूका सामु निहुरिँदै आफ्‍नो भक्ति प्रकट गर्दथे। तिनीहरूले आफ्‍ना दुष्‍ट व्‍यवहार र हठी चाललाई छोड्‌न अस्‍वीकार गरे।
मैले देखेको छु, कि अधर्म जोत्‍ने र दु:ख छर्नेहरूले, आफैले छरेको कुराको कटनी गर्छन्‌।
आफ्‍नै नजरमा बुद्धिमान्‌ नहोऊ, परमप्रभुको भय मान्‌ र दुष्‍कर्मलाई त्‍याग्‌।
किनभने दुष्‍टहरू खराब काम नगरुञ्‍जेल सुत्‍न सक्‍दैनन्, कसैको पतन नगरुञ्‍जेल तिनीहरूलाई निद्रै लाग्‍दैन।
परमेश्‍वरको भय मान्‍नु दुष्‍टतालाई घृणा गर्नु हो, अभिमान, अहङ्कार, खराब चालचलन र भड्‌काउने कुराहरू म घृणा गर्छु।
परमप्रभुको मार्ग धर्मीहरूका निम्‍ति एक शरणस्‍थान हो, तर दुष्‍ट काम गर्नेहरूका निम्‍ति विध्‍वंस हो।
खराब युक्ति रच्‍नेहरूको हृदय छली हुन्‍छ, तर शान्‍तिको बढ़ौती गर्नेलाई रमाहट हुन्‍छ।
जसको कल्‍पना दुष्‍टताले पूर्ण छ, र उपद्र्याइँ सोच्‍दछ, त्‍यसले भ्रमलाई जन्‍म दिन्‍छ।
मलाई दुष्‍टहरूसित र दुष्‍ट काम गर्नेहरूसित नलैजानुहोस्‌, जो तिनीहरूका छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण कुरा त गर्दछन्‌, तर तिनीहरूका हृदयमा भने द्वेष हुन्‍छ।
किनकि कुकर्मीहरू बहिष्‍कृत हुनेछन्‌, तर परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले देश अधिकार गर्नेछन्‌।
खराबी बोल्‍नलाई तँ आफ्‍नो मुख चलाउँछस्‌, र तेरो जिब्रोलाई छली कुराको लागि काममा लगाउँछस्‌।
तिनीहरूका निष्‍ठुर हृदयबाट दुष्‍टता निस्‍कन्‍छ, तिनीहरूका मनको दुष्‍ट अहङ्कारको सीमा छैन।
दुष्‍ट काम गर्ने मानिसहरूसित दुष्‍कर्ममा सहभागी हुन मेरो हृदय खराब कुरातिर नबरालिओस्‌, र मलाई तिनीहरूको स्‍वादिष्‍ठ भोजन खानु नपरोस्‌।
यसकारण शरीरका अभिलाषाअनुसार चल्‍नु नपरोस्‌ भनी तिमीहरूका मरणशील शरीरमा पापलाई राज्‍य गर्न नदेओ।
खराबीबाट पराजित नहोओ, तर खराबीलाई भलाइले जित।
 किनकि भित्रबाट, अर्थात्‌ मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्‍यभिचार, चोरी, हत्‍या, परस्‍त्रीगमन, लोभ, दुष्‍टता, छल, छाडापन, ईर्ष्‍या, निन्‍दा, घमण्‍ड, मूर्खता निस्‍कन्‍छन्‌।
 ए सर्पका बच्‍चा हो! तिमीहरू आफै दुष्‍ट छौ, असल कुरा कसरी बोल्‍न सक्‍छौ? किनभने हृदयमा भरिएका कुराहरू नै मुखबाट निस्‍कन्‍छन्‌। असल मानिसले आफू भित्र भरिएका असल थोकबाट असलै थोक निकाल्‍छ, तर दुष्‍ट मानिसले आफूमा भरिएको दुष्‍टताबाट दुष्‍ट थोक नै निकाल्‍छ।
 परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नभनोस्, “परमेश्‍वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको हो।” किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्‍वरको परीक्षा हुन सक्‍दैन, र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्‍न। तर हरेक मानिस आफ्‍नै खराब इच्‍छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ।
 जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो। यो शरीरका अङ्गहरूमध्‍ये अधर्मको एउटा दुनियाँ नै हो। यसले सारा शरीरलाई दूषित पार्दछ र जीवनको सारा क्रममा नै आगो सल्‍काइदिन्‍छ र नरकको आगोमा त्‍यो जल्‍छ! हरेक किसिमका पशुपक्षी, घस्रने जन्‍तु र समुद्रका जीवजन्‍तुलाई तह लगाउन सकिन्‍छ, र मानिस जातिबाट नै तह लगाइएको छ। तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले तह लाउन सक्‍दैन। घातक विषले भरिएको यो चञ्‍चल दुष्‍ट हो।
 यहूदी त्‍यो हो, जो भित्री रूपले यहूदी हो, र साँचो खतनाचाहिँ हृदयको कुरो हो, यो आत्‍मिक कुरा हो, लिखित व्‍यवस्‍थाको कुरा होइन। यस्‍तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन, तर परमेश्‍वरबाट हुन्‍छ। अब यहूदीलाई के फाइदा छ त? अथवा खतनाको के मोल? हरप्रकारले यसमा ज्‍यादै लाभ छ। सर्वप्रथम त परमेश्‍वरको वाणी यहूदीहरूलाई सुम्‍पिएको हो। यदि तिनीहरूमध्‍ये कसैकसैले विश्‍वास गरेनन्‌ भने, के भयो त? के तिनीहरूको अविश्‍वासले परमेश्‍वरको विश्‍वासयोग्‍यतालाई रद्द तुल्‍याउँछ र?
 तर झगड़ालु, सत्‍यको पालन नगर्ने, र दुष्‍टतामा हिँड्‌नेहरूमाथि चाहिँ क्रोध र रीस पर्नेछ। खराब काम गर्ने हरेक मानिसमाथि सङ्कष्‍ट र आपद्‌ आइपर्नेछ, पहिले यहूदीमाथि र अन्‍यजातिहरूमाथि पनि। तर असल काम गर्ने हरेकलाई पहिले यहूदीलाई अनि अन्‍यजातिलाई पनि गौरव, इज्‍जत र शान्‍ति प्राप्‍त हुनेछ। किनकि परमेश्‍वरले पक्षपात गर्नुहुन्‍न। सबै जसले व्‍यवस्‍थाविना पाप गरेका छन्, तिनीहरू व्‍यवस्‍थाविना नै नष्‍ट पनि हुनेछन्, र व्‍यवस्‍थामुनि रहेर पनि पाप गर्नेहरूको इन्‍साफ व्‍यवस्‍थाद्वारा नै हुनेछ।
 किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्‍धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्‍वर्गीय स्‍थानहरूमा भएका दुष्‍ट्याइँका आत्‍मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसैकारण परमेश्‍वरका सारा हातहतियार उठाओ, र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक, र सबै काम गरेर खड़ा हुन सक्‍ने होओ। यसकारण आफ्‍ना कम्‍मर सत्‍यले कसेर, धार्मिकताको छाती-पाता लाएर खड़ा होओ, र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लाएर तयार होओ। साथै विश्‍वासको ढाल उठाओ, जसबाट तिमीहरू दुष्‍टका सबै अग्‍निबाण निभाउन सक्‍नेछौ।
 बुद्धिमान्‌ मानिसले परमप्रभुको भय राख्‍छ र खराबीदेखि टाढ़ै रहन्‍छ, तर मूर्खचाहिँ गरम मिजासको र असावधानी हुन्‍छ। रिसाहा मानिसले मूर्ख कामहरू गर्छ, र धूर्त मानिस घृणित हुन्‍छ। अज्ञानीले मूर्खता कमाउँछ, तर समझदारहरूले ज्ञानको मुकुट लगाउँछन्‌। खराब मानिसहरू असल मानिसहरूका सामु र दुष्‍टहरू धर्मीहरूको ढोका अघि झुक्‍नुपर्छ। आफ्‍नै छिमेकीहरूबाट समेत गरीबहरू त्‍यागिन्‍छन्, तर धनीका त धेरै मित्रहरू हुन्‍छन्‌। आफ्‍नो छिमेकीलाई हेला गर्नेले पाप गर्छ, तर त्‍यो मानिस धन्‍य हो, जसले दरिद्रलाई दया गर्छ। के खराब योजना रच्‍नेहरू बरालिँदैनन्‌ र? तर असल योजना बनाउनेहरूले प्रेम र ईमानदारी प्राप्‍त गर्छन्‌।
 किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्‍छु, त्‍यो म गर्दिनँ, तर दुष्‍ट काम, जो म गर्न चाहन्‍नँ, त्‍यही म गर्ने गर्छु। अब म जो इच्‍छा गर्दिनँ, त्‍यही गर्छु भने त्‍यो गर्ने म होइनँ, तर मभित्र वास गर्ने पाप हो। यसरी एउटा नियमले काम गरेको म पाउँछु। जब म भलो गर्न चाहन्‍छु, तब दुष्‍टतालाई मेरो नजिकै उपस्‍थित पाउँछु। किनकि म मेरो अन्‍तस्‍करणमा परमेश्‍वरको व्‍यवस्‍थामा आनन्‍दित हुन्‍छु, तर मेरा अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछु, र मेरा अङ्गहरूमा वास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्‍धनमा पार्दछ। हाय, म कस्‍तो दुःखी मानिस! यस मृत्‍युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला? येशू ख्रीष्‍ट हाम्रा प्रभुद्वारा नै— परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद होस्‌। त्‍यसैले म स्‍वयम्‌ आफ्‍नो मनले त परमेश्‍वरका व्‍यवस्‍थाको सेवा गर्दछु, तर मेरो पापमय स्‍वभावद्वारा चाहिँ म पापका व्‍यवस्‍थाको सेवा गर्दछु।
 तब उहाँ भीड़लाई छोड़ेर घरमा जानुभयो, र उहाँका चेलाहरूले उहाँकहाँ आएर भने, “खेतको सामाबारे दृष्‍टान्‍तको अर्थ हामीलाई बताइदिनुहोस्‌।” उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “असल बीउ छर्नेचाहिँ मानिसको पुत्र हो। खेत संसार हो। असल बीउचाहिँ राज्‍यको सन्‍तान हो, र सामा दुष्‍टको सन्‍तान हो। सामा रोप्‍ने शत्रुचाहिँ दियाबलस हो। फसलको समयचाहिँ युगको अन्‍त्‍य हो। खेतालाहरू स्‍वर्गदूतहरू हुन्‌। “जसरी सामा उखेलेर आगोमा भस्‍म गरिन्‍छ, युगको अन्‍त्‍यमा पनि त्‍यस्‍तै हुनेछ। मानिसको पुत्रले आफ्‍ना दूतहरू पठाउनेछ, र पाप गर्न लाउने प्रत्‍येक थोक र दुष्‍ट काम गर्नेहरू सबैलाई तिनीहरूले उसको राज्‍यबाट बटुल्‍नेछन्, र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्‌। त्‍यहाँ मानिसहरू रुनेछन्‌ र दाह्रा किट्‌नेछन्‌। तब धर्मी जनहरू आफ्‍ना पिताको राज्‍यमा सूर्यजस्‍ता चम्‍किला हुनेछन्‌। जसको कान छ, त्‍यसले सुनोस्‌।
 बदमाश र दुष्‍ट मानिस त्‍यही हो जो भ्रष्ट कुराकानी गरिहिँड्‌छ, जसले आँखा झिम्‍क्‍याउँछ, र खुट्टा र औँलाले इशारा गर्दछ। आफ्‍नो छली हृदयमा त्‍यसले दुष्‍ट कुरा रच्‍दछ। त्‍यसले सधैँ विवाद उत्‍पन्‍न गराउँछ। त्‍यसैले त्‍यसमाथि अचानक विपत्ति आइलाग्‍नेछ, उपायविना नै त्‍यो एक्‍कासि नष्‍ट हुनेछ। छ वटा कुराहरू छन्, जसलाई परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्‍छ, सातौँचाहिँ जो उहाँको दृष्‍टिमा घृणित छन्‌: अहङ्कारी आँखा, झूट बोल्‍ने जिब्रो, निर्दोषको रगत बगाउने हात, दुष्‍ट योजनाहरू रच्‍ने हृदय, खराबी काम गर्न झट्टै अग्रसर हुने पाइला, असत्‍य बोल्‍ने झूटो साक्षी, र दाजुभाइहरूका माझमा झगड़ा उठाउने मानिस।
 जब मानिसहरूको संख्‍या पृथ्‍वीमा बढ्‌दैगयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्‍मे, तब परमेश्‍वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्‍दरी देखे, र आ-आफ्‍ना रुचिका पत्‍नीहरू ल्‍याए। तब परमप्रभुले भन्‍नुभयो, “मेरो आत्‍माले मानिससँग सधैँ संघर्ष गर्नेछैन, किनभने त्‍यो मरणशील हो। त्‍यसको उमेर एक सय बीस वर्षको हुनेछ।” त्‍यस बेला र त्‍यसपछि पनि पृथ्‍वीमा नेफिलीमहरू थिए। परमेश्‍वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरूकहाँ जान लागे र सन्‍तान जन्‍माए। तिनीहरू नै उहिलेका शूरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए। पृथ्‍वीमा मानिसहरूको दुष्‍टता बढ़ी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्‍तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्‍नुभयो। पृथ्‍वीमा मानिसलाई बनाउनुभएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो, र उहाँ मनमा साह्रै दु:खित हुनुभयो। त्‍यसकारण परमप्रभुले भन्‍नुभयो, “मैले सृष्‍टि गरेको मानिसलाई पृथ्‍वीबाट म मेटिदिनेछु— के मानिस, के घस्रने जन्‍तु, के आकाशका पक्षी सबैलाई— किनभने ती बनाएकोमा मलाई दु:ख लागेको छ।” तर नोआमाथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो।
१ तिमोथी ६:२-१०
 विश्‍वासी मालिकहरूलाई तिनका कमाराहरूले विश्‍वासमा दाजुभाइ भन्‍दैमा अनादर नगरून्‌। बरु तिनीहरूले उनीहरूको झन्‌ बढ़ी सेवा गरून्, किनभने तिनीहरूका सेवाबाट लाभ पाउनेहरू विश्‍वासी र प्रियहरू नै हुन्‌। यी कर्तव्‍यहरू पालन गर्न सिकाऊ, र आग्रह गर। यदि कसैले अरू सिद्धान्‍त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टको उचित वचन र ईश्‍वरभक्तिअनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने, त्‍यो घमण्‍डले फुलेको हुन्‍छ, र त्‍यसले केही जानेको हुँदैन। त्‍यसले व्‍यर्थको वाद-विवाद गर्छ, र एक-एक शब्‍द लिएर झगड़ा गर्न खोजिहिँड्‌छ। यी कुराहरूले डाह, कलह, बदनामी र खराब शङ्काहरू उत्‍पन्‍न गराउँछन्, र बुद्धि भ्रष्‍ट भएका र सत्‍यबाट अलग भएका मानिसहरूका माझमा कचिङ्गल उठाउँछन्, अनि भक्तिचाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनी तिनीहरू ठान्‍छन्‌। सन्‍तुष्‍टिसहितको भक्ति नै ठूलो लाभ हो। किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्‍यायौं न यहाँबाट केही लैजान नै सक्‍छौं। तर खान र लाउनसम्‍म छ भने हामी त्‍यसैमा सन्‍तुष्‍ट हुनेछौं। तर धनी हुने इच्‍छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्‍छन्‌ र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्‍छाहरूमा डुब्‍छन्, जसले मानिसहरूलाई बरबादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्‌। किनभने रुपियाँपैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड़ हो। पैसाको लोभमा परेर कोही-कोही विश्‍वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन्, र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्‌।
 आफ्‍नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्‍ना ओठलाई झूट बोल्‍नबाट अलग्‍ग राख। खराबीबाट फर्केर असल गर, शान्‍ति खोज, र त्‍यसकै पछि लाग। परमप्रभुको नजर धर्मात्‍माहरूमाथि रहन्‍छ, र उहाँले तिनीहरूको पुकारा सुन्‍नुहुन्‍छ। परमप्रभुको मुहार खराबी गर्नेहरूका विरुद्धमा हुन्‍छ, अनि उहाँले तिनीहरूको स्‍मृतिसम्‍म पनि धरतीबाट मेटाइदिनुहुनेछ। जब धार्मिक जनहरूले पुकारा गर्छन्‌, तब परमप्रभुले सुन्‍नुहुन्‍छ, र तिनीहरूका सबै सङ्कष्‍टबाट तिनीहरूलाई उद्धार दिनुहुन्‍छ। चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्‍छ, र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्‍छ। धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्‍छन्‌, तर परमप्रभुले त्‍यसलाई ती सबैबाट उद्धार दिनुहुन्‍छ। परमप्रभुले त्‍यसका सबै हाड़हरूको रक्षा गर्नुहुन्‍छ। तिनमा एउटै पनि भाँचिँदैन। खराबीले दुष्‍टलाई नष्‍ट पार्दछ, र धार्मिक जनका विरोधीहरू जति दोषी ठहरिनेछन्‌।
 सङ्गीत-निर्देशकको निम्‍ति दाऊदको मस्‍किल  हे शक्तिशाली मानिस, तिमी किन खराबीमा अहङ्कार गर्दछौ? सारा दिन तिमी किन अहङ्कार गर्दछौ, तिमी, जो परमेश्‍वरको दृष्‍टिमा अपमानित छौ। ए छली काम गर्ने, तिम्रो जिब्रो धारिलो छुराजस्‍तो छ, त्‍यसले विनाशको युक्ति निकाल्‍दछ। असलभन्‍दा खराब तिमी रुचाउँछौ, र साँचो कुरा बोल्‍नुभन्‍दा बरु ढाँट्‌नु तिमीलाई मन पर्छ। सेला तँ छली जिब्रो, सबै विनाशकारी कुराहरू तँ मन पराउँछस्‌। परमेश्‍वरले निश्‍चय तँलाई सदाको निम्‍ति नाश गर्नुहुनेछ। उहाँले तँलाई तानेर तेरो निवासस्‍थानबाट निकाल्‍नुहुनेछ, र जिउँदाको भूमिबाट तँलाई जरैसमेत उखेल्‍नुहुनेछ। धर्मीहरू यो देखेर भयभीत हुनेछन्‌। सेला तिनीहरूले यसो भनी त्‍यसको हाँसो उड़ाउनेछन्‌, “हेर यो मानिस, जसले परमेश्‍वरलाई आफ्‍नो आश्रय बनाएन, तर आफ्‍ना धन-सम्‍पत्तिको प्रशस्‍ततामा भरोसा राख्‍यो, र अरूलाई विनाश गरी बलियो भयो।” तर मचाहिँ परमेश्‍वरको भवनमा हरियो जैतूनको वृक्षसमान छु। म परमेश्‍वरको कहिल्यै नटुङ्गिने प्रेममा सदासर्वदा भरोसा राख्‍तछु। तपाईंले जे गर्नुभएको छ त्‍यसको निम्‍ति म सदासर्वदा तपाईंको स्‍तुति गर्नेछु। म तपाईंको नाउँमाथि भरोसा गर्नेछु, किनकि तपाईंको नाउँ असल छ। तपाईंका भक्तजनहरूको उपस्‍थितिमा म तपाईंको प्रशंसा गर्नेछु।
 सूर्यमुनि हुने प्रत्‍येक काममा दुष्‍टता छ। सबैलाई एकै अन्‍त्‍य आइपर्छ। मानिसहरूका हृदय दुष्‍टताले भरिएका हुन्‍छन्, र तिनीहरूका जीवनकालभरि नै तिनीहरूका हृदय पागलपनाले भरिन्‍छन्, अनि त्‍यसपछि तिनीहरू मरेकाहरूसँग मिल्‍नजान्‍छन्‌। बाँचिरहनेहरूका साथमा हुनेसँग आशा हुन्‍छ। जिउँदो कुकुरको स्‍थिति मरेको सिंहको भन्‍दा असल हो। किनभने हामीहरू मर्नेछौं भनी जीवितहरूले जान्‍दछन्, तर मरेकाहरूले त केही पनि जान्‍दैनन्‌। तिनीहरूका निम्‍ति केही प्रतिफल हुँदैन। तिनीहरूको सम्‍झना पनि लोप हुन्‍छ। तिनीहरूका प्रेम, घृणा, ईर्ष्‍या सबै लोप भएका हुन्‍छन्‌। सूर्यमुनि गरिएको कुनै काममा तिनीहरूको फेरि कहिल्‍यै भाग हुँदैन। आफ्‍नो बाटो लाग, आफ्‍नो खानेकुरा आनन्‍दसँग खाऊ, खुशी मनले आफ्‍नो दाखमद्य पिऊ, किनभने तिमीले गरेको काममा अहिले परमेश्‍वरको निगाह रहेको छ। सधैँ सेतो वस्‍त्र पहिराऊ, र कपालमा तेल लगाऊ। परमेश्‍वरले सूर्यमुनि दिनुभएको यस व्‍यर्थ जीवनकालमा आफूले प्रेम गरेकी पत्‍नीसँग जीवनको सुख-भोग गर। किनभने यस जीवनमा र सूर्यमुनि तिमीले गरेको परिश्रममा तिम्रो भाग त्‍यही नै हुन्‍छ। तिम्रो हातमा जे काम छ त्‍यो आफ्‍नो पूरा शक्तिले गर, किनभने चिहानमा, जहाँ तिमी जान्‍छौ, त्‍यहाँ न त केही गर्ने, न योजना गर्ने, न ज्ञान, न बुद्धि नै हुन्‍छ। सूर्यमुनि एउटा अर्को कुरा मैले देखेको छु: चाँड़ो दगुर्नेले दौड़ जित्‍दैन, न शक्तिशालीले युद्ध जित्‍छ, न त बुद्धिमान्‌लाई भोजन आउँछ, न तीव्र ज्ञानीलाई धन-सम्‍पत्ति आउँछ, वा न त पढ़ेकाले निगाह प्राप्‍त गर्छ। तर समय र मौका नै तिनीहरू सबैले पाउँछन्‌। त्‍यसबाहेक आफ्‍नो काल कहिले आउँछ भनी कुनै मानिसले जान्‍दैन। माछा निर्दयी जालमा र चरा पासोमा परेझैँ मानिसहरू पनि नसोच्‍दै दुर्दशामा फेला पर्छन्‌।
 दुष्‍ट मानिसले आफ्‍नो अहङ्कारमा कमजोरहरूलाई लखेट्‌छ। त्‍यसले रचेका योजनामा तिनीहरू फस्‍छन्‌। दुष्‍ट आफ्‍नो हृदयका इच्‍छाहरूमा गर्व गर्दछ, त्‍यसले लालची मानिसलाई आशीर्वाद दिन्‍छ र परमप्रभुलाई निन्‍दा गर्दछ। आफ्‍नो अहङ्कारमा दुष्‍टले उहाँलाई खोज्‍दैन, त्‍यसका सबै विचारमा परमेश्‍वरलाई स्‍थान हुँदैन। त्‍यसका कामकाजमा त्‍यो सधैँ सफल हुन्‍छ। त्‍यो अभिमानी हुन्‍छ, र तपाईंका विधिहरू त्‍यसबाट टाढ़ा हुन्‍छन्‌। आफ्‍ना सबै शत्रुहरूको त्‍यसले उपहास गर्दछ। त्‍यसले आफ्‍नो मनमा सोच्‍छ, “कुनै कुरोले मलाई हल्‍लाउन सक्‍नेछैन, म सधैँ सुखी हुनेछु र मलाई कुनै कष्‍ट आइपर्नेछैन।” त्‍यसको मुख सराप, झूट र धम्‍कीले भरिएको हुन्‍छ। त्‍यसको जिब्रोमा उपद्रव र दुष्‍टता छन्‌। गाउँ-गाउँकै नजिक त्‍यो ढुकिबस्‍छ। ढुकेर बसेका ठाउँहरूमा त्‍यसले निर्दोषहरूको हत्‍या गर्छ। त्‍यसले दु:खीहरूलाई लुकी-लुकी चियो गरिराखेको हुन्‍छ। झाडीमा पर्खेर बसिरहेको सिंहझैँ त्‍यो गुप्‍त ठाउँमा ढुकेर बस्‍छ। असहायहरूलाई पक्रन त्‍यो ढुकेर बस्‍छ। त्‍यसले आफ्‍नो जालमा असहायहरूलाई घिसारेर लैजान्‍छ। दु:खीहरू पेलिन्‍छन्‌ र लाचार भई लड्‌छन्‌, र तिनीहरू त्‍यसको शक्तिले ढल्‍दछन्‌। त्‍यसले आफ्‍नो मनमा सोच्‍दछ, “परमेश्‍वरले बिर्सनुभएको छ। उहाँले आफ्‍नो मुहार लुकाउनुभएको छ, र कहिल्‍यै देख्‍नुहुन्‍न।” हे परमप्रभु, उठ्‌नुहोस्‌, हे परमेश्‍वर, तपाईंको हात उठाउनुहोस्‌, असहायहरूलाई नबिर्सनुहोस्‌।
 ईमानदारको मूलबाटो खराबीदेखि अलग रहन्‍छ। जसले आफ्‍नो बाटोको रखवाली गर्छ, त्‍यसले आफ्‍नो जीवनको रखवाली गर्छ। सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्‍डी आत्‍मा आउँछ। आत्‍मामा नम्र भएर थिचोमिचोमा परेकाहरूका माझमा रहनु अहङ्कारीहरूसित लूटको माल बाँड्‌नुभन्‍दा उत्तम हो। उपदेशलाई ध्‍यान दिने मानिस फल्‍दो-फुल्‍दो हुन्‍छ, र परमप्रभुमा भरोसा राख्‍ने मानिसले आशिष्‌ पाउनेछ। हृदयमा बुद्धिमान्‌ हुनेहरूलाई विवेकशील भनिन्‍छ, र मीठा वचनहरूले शिक्षा बढ़ाउँछन्‌। समझदारी हुनेको निम्‍ति त्‍यो जीवनको मूल हो, तर मूर्खले मूर्खताकै कारण दण्‍ड ल्‍याउँछ। बुद्धिमान्‌को हृदयले आफ्‍नो मुख सम्‍हाल्‍छ, र त्‍यसका ओठले शिक्षा बढ़ाउँछन्‌। मीठा वचनहरू महका चाकाहरूजस्‍तै हुन्, जसले प्राणलाई मिठास दिन्‍छ, र हड्डीहरू निको पार्छ। कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठीक देखिएला, तर अन्‍त्‍यमा त्‍यसले मृत्‍युमा पुर्‍याउँछ। परिश्रमीको पेटले नै त्‍यसलाई काम गर्न लाउँछ, त्‍यसको भोकले त्‍यसलाई कजाउँछ। बदमाशले खराबी रच्‍दछ, अनि त्‍यसको बोलीवचन प्रखर आगोझैँ हुन्‍छ।
 सङ्गीत-निर्देशकको निम्‍ति दाऊदको भजन  दुष्‍टका पापको सम्‍बन्‍धमा मेरो हृदयमा एउटा ईश्‍वरवाणी छ, त्‍यसका आँखाअगि परमेश्‍वरको डर हुँदैन। किनकि त्‍यसले आफ्‍नो यति प्रशंसा गर्छ कि आफ्‍नो पाप त्‍यसले फेला पार्दैन र घृणा गर्दैन। त्‍यसको मुखका कुराहरू दुष्‍ट र छली छन्‌। बुद्धिमानी हुनु र भलाइको काम गर्न त्‍यसले छोडिसकेको छ। त्‍यसले आफ्‍नो ओछ्यानमा पनि कुकर्मको योजना बनाउँछ, त्‍यसले आफूलाई कुमार्गतिर लगाउँछ, त्‍यसले खराबीलाई अस्‍वीकार गर्दैन। हे परमप्रभु, तपाईंको कृपा स्‍वर्गैसम्‍म फैलिएको छ, तपाईंको विश्‍वसनीयता आकाशसम्‍मै। तपाईंको धार्मिकता विशाल पहाड़हरूजस्‍तै छ, तपाईंको न्‍याय अगाध समुद्रजस्‍तै छ। हे परमप्रभु, तपाईंले मानिस र पशुलाई जोगाइराख्‍नुहुन्‍छ। तपाईंको अडिग कृपा कति अनमोलको छ! मानिसका सन्‍तानले तपाईंका पखेटाको छायामा शरण पाउँछन्‌। तपाईंका भवनको प्रचुरताबाट तिनीहरूले भोज गर्छन्‌, र तपाईंको सुख-चैनको नदीबाट तपाईंले तिनीहरूलाई पियाउनुहुन्‍छ। किनकि जीवनको स्रोत तपाईंसँग छ, तपाईंकै ज्‍योतिमा हामी प्रकाश देख्‍छौं। तपाईंलाई चिन्‍नेहरूमाथि तपाईंको प्रेम रहिरहोस्‌। र सत्‍यनिष्‍ठ हृदय हुनेहरूमा तपाईंको धार्मिकता रहिरहोस्‌। अहङ्कारीको खुट्टा मलाई कुल्‍चन नआओस्‌, न त दुष्‍टको हातले मलाई गलहत्त्याउन पाओस्‌। कुकर्मीहरू कसरी ढलेर लम्‍पसार परेका छन्‌, तिनीहरू उठ्‌नै नसक्‍ने गरी पछारिएका छन्‌।
 हे मेरो छोरा, आफ्‍नो बुबाको आदेश सुन्‌ र आफ्‍नी आमाको शिक्षा नत्‍याग्‌। ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट, र तेरो गलामा सम्‍मानको हार हुनेछ। हे मेरो छोरा, यदि पापीहरूले तँलाई बहकाउन खोजे भने, तिनीहरूको बहकाउमा नलाग्‌। तिनीहरू भन्‍लान्, “आऊ हामीसँग, कसैको रक्तपात गर्न ढुकिबसौं, कुनै निर्दोषलाई लुट्‌न ढुकिबसौं, चिहानले निलेझैँ, र गहिरो भड्‌खालोमा परी त्‍यसको पीँधमा पुग्‍नेहरूलाई झैँ, हामी तिनीहरूलाई पूरै जिउँदै निलौं। हामी सबै किसिमका बहुमूल्‍य थोकहरू लिनेछौं, र लूटका मालसामानले हाम्रा घर भर्नेछौं, तिमी हामीसँगै साझेदार होऊ, र हामी लूटको थैलोबाट बाँड्‌नेछौं।” हे मेरो छोरा, तिनीहरूसँग नजा, तिनीहरूको मार्गमा पाइलै नराख्, किनकि तिनीहरूका पाइला पाप गर्न हतारिन्‍छन्, तिनीहरू रक्तपात गर्न आतुरी गर्छन्‌। सबै पक्षीहरूका नजरको सामु जाल फैलाउनु कति व्‍यर्थ! यी मानिसहरू आफ्‍नै रगतको लागि ढुकिरहन्‍छन्, तिनीहरू आफै जाकिन ढुकिरहन्‍छन्‌! बेईमानीसित कमाउनपट्टि लाग्‍नेहरू सबैको अन्‍त्‍य यस किसिमले हुन्‍छ, यसरी धन आर्जन गर्नेको जीवन त्‍यसैले छिनेर लैजान्‍छ।
 कसैले न्‍याय माग्‍दैन। कसैले ईमानदारीसाथ वकालत गर्दैन। तिनीहरू खोक्रो तर्कमा भर पर्छन्‌ र झूट बोल्‍छन्‌। तिनीहरू उपद्रव रच्‍दछन्, र अधर्म जन्‍माउँछन्‌। तिनीहरू साँभे सर्पका फुल ओथ्रन्‍छन्, र माकुराको जाल बुन्‍छन्‌। तिनीहरूका फुल खाने जोसुकै पनि मर्नेछ, र त्‍यसलाई फुटायो भने साँपको बच्‍चा निस्‍कन्‍छ। तिनीहरूका जालले वस्‍त्र बनिँदैन, तिनीहरूले बनाएका थोकले तिनीहरू आफैलाई ढाक्‍न सक्‍दैनन्‌। तिनीहरूका काम अधर्मका काम हुन्, र उपद्रवका काम नै तिनीहरूका हातमा हुन्‍छन्‌। तिनीहरूका खुट्टा पापको कामतिर दौड़न्‍छन्, र तिनीहरू निर्दोषको रगत बगाउन हतार गर्छन्‌। तिनीहरूका विचार अधर्मका विचार हुन्‌। उजाड़ र नाशले तिनीहरूको बाटो चिनाउँछन्‌। तिनीहरू शान्‍तिको बाटो चिन्‍दैनन्, र तिनीहरूका मार्गमा न्‍याय छैन। तिनीहरूले आफ्‍ना मार्गहरू बाङ्गा-टेढ़ा बनाएका छन्‌। त्‍यसबाट हिँड्‌ने कसैले शान्‍तिलाई जान्‍नेछैन। यसैले न्‍याय हामीहरूदेखि टाढ़ा भएको छ। धार्मिकताले हामीलाई भेट्टाउन सक्‍दैन। हामीहरू उज्‍यालोको बाटो हेर्छौं, तर सबै अन्‍धकार छ। प्रकाशको बाटो हेर्छौं, तर घोर अँध्‍यारोमा हिँड्‌दछौं! अन्‍धा मानिसझैँ हामी भित्ता छाम्‍दछौं, आँखा नभएकाहरूले झैँ हामी आफ्‍नो बाटो छाम्‍दछौं। हामी मध्‍यदिनमा पनि साँझमा झैँ ठेस खान्‍छौं। बलियाहरूका बीचमा हामी मरेका झैँ छौं। हामी सबै भालूझैँ कराउँछौं, र ढुकुरझैँ साह्रै विलाप गर्दछौं। हामी न्‍याय माग्‍छौं, तर कतै पाउँदैनौं, मुक्तिको बाटो खोज्‍छौं, तर त्‍यो हामीबाट टाढ़ा छ। किनकि हाम्रा अपराध तपाईंको दृष्‍टिमा अनेक छन्, र हाम्रा पापले हाम्रै विरुद्धमा गवाही दिन्‍छन्‌। हाम्रा अपराध हामीसितै छन्, र हाम्रा अधर्महरू हामी स्‍वीकार गर्दछौं। परमप्रभुको विरुद्धमा बागीपन र विश्‍वासघात, हाम्रा परमेश्‍वरलाई पिठिउँ देखाई अत्‍याचार र विद्रोह रचेका छौं, र हाम्रा हृदयले उत्‍पन्‍न गरेका झूटा कुराहरू हामीले बोलेका छौं। यसैले न्‍याय पछिल्‍तिर हटाइएको छ, र धार्मिकता टाढ़ा भएको छ, सत्‍यले चाहिँ सड़कहरूमा ठेस खाएको छ, र ईमानदारीले प्रवेश गर्न सक्‍दैन। सत्‍यता कहीँ पनि पाइँदैन, र दुष्‍टदेखि अलग बस्‍ने जोसुकै पनि शिकार बन्‍छ। परमप्रभुले हेर्नुभयो, र न्‍याय रहेन भनेर उहाँ रिसाउनुभयो।
 र यदि मैले चेताउनी दिएको जातिले आफ्‍नो खराबीदेखि पछितो गर्‍यो भने, मैले सोचेको विपत्ति त्‍यसमाथि ल्‍याउनदेखि म मेरो मन बद्‌लनेछु। अनि यदि कुनै जाति अथवा कुनै राज्‍यको विषयमा म त्‍यसलाई बनाउनेछु र खड़ा गर्नेछु भनी कुनै समयमा मैले घोषणा गरेको छु भने, र त्‍यसले मेरो कुरा नसुनेर मेरो दृष्‍टिमा खराबी गर्‍यो र मेरो आज्ञापालन गरेन भनेदेखि, त्‍यसलाई असल गर्ने मेरो विचारमाथि फेरि म विचार गर्नेछु। “यसैकारण अब यहूदाका मानिसहरू र यरूशलेममा बस्‍नेहरूलाई भन्, ‘परमप्रभु यही भन्‍नुहुन्‍छ: हेर, म तिमीहरूका विरुद्धमा सर्वनाश तयार गरिरहेछु, र तिमीहरूका विरुद्धमा एउटा युक्ति रचिरहेछु। यसैले तिमीहरू हरेक आ-आफ्‍नो दुष्‍ट मार्गबाट फर्क, र तिमीहरूका चाल र कामहरू सुधार’। तर तिनीहरूले त यस्‍तो जवाफ दिनेछन्, ‘त्‍यसो गर्नु व्‍यर्थ छ। हामी त आफ्‍नै युक्तिअनुसार हिँड्‌नेछौं, हामी हरेक आफ्‍नै दुष्‍ट हृदयको हठअनुसार चल्‍नेछौं’।” यसकारण परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ: “जाति-जातिहरूकहाँ गएर सोध, यस्‍तो कुरो कसले सुनेको छ? कुमारी इस्राएलले अति घृणित काम गरेकी छ। के लेबनानको हिउँ कहिले त्‍यसको पहराको भीरबाट हराउँछ र? के त्‍यसको टाढ़ा मुहानबाट बगेर आउने चिसो पानी कहिले रोकिन्‍छ र? तरै पनि मेरो प्रजाले त मलाई बिर्सिसकेको छ, तिनीहरू बेकामका मूर्तिहरूलाई धूप बाल्‍छन्, जसले तिनीहरूलाई आफ्‍ना मार्गमा र पुराना बाटाहरूमा ठेस खान लगाएका छन्, र तिनीहरूलाई पक्‍की सड़कमा होइन तर गोरेटोतिर हिँड़ाएका छन्‌। तिनीहरूको देश उजाड़ पारिनेछ, र सदासर्वदा गिल्‍लाको पात्र हुनेछ। त्‍यसबाट हिँड्‌ने सबै तर्सनेछन्, र टाउको हल्‍लाउनेछन्‌। पूर्वीय बतासझैँ तिनीहरूका शत्रुहरूका सामुन्‍ने म तिनीहरूलाई तितरबितर पारिदिनेछु। तिनीहरूका सर्वनाशको दिनमा म तिनीहरूलाई मेरो मुख होइन, तर मेरो पीठ फर्काइदिनेछु।” तिनीहरूले भने, “आऔं, हामीहरू यर्मियाको विरुद्धमा षड्‌यन्‍त्र रचौं, किनकि न त पूजाहारीले सिकाएको व्‍यवस्‍था नष्‍ट हुनेछ, न बुद्धिमान्‌ पुरुषको सल्‍लाह, न अगमवक्ताबाट दिइएको वचन हराउनेछ। यसैले आऔं, हामीहरू कुराद्वारा त्‍यसलाई आक्रमण गरौं, र त्‍यसको कुनै पनि कुरामा ध्‍यान नदिऔं।” हे परमप्रभु, मेरा कुरा ध्‍यानसित सुन्‍नुहोस्, मलाई दोष लाउनेहरूले के भनिरहेका छन्‌ सुन्‍नुहोस्‌! के भलाइको सट्टामा खराबी गरिन्‍छ? तर मेरा विरोधीहरूले मेरो प्राणको लागि एउटा खाड़ल खनेका छन्‌। तपाईंको क्रोध तिनीहरूदेखि पर हटाउनलाई तिनीहरूका पक्षमा कुरा गर्न म तपाईंको सामुन्‍ने खड़ा भएँ, सो सम्‍झनुहोस्‌।
 सोझाहरूको धार्मिकताले तिनीहरूलाई छुटाउँछ, तर अविश्‍वासीहरू खराब अभिलाषाहरूको कारण पासोमा पर्छन्‌। जब दुष्‍ट मानिस मर्छ, त्‍यसको आशा पनि नष्‍ट हुन्‍छ, आफ्‍नो सामर्थ्‍यमा त्‍यसले इच्‍छा गरेका सबै कुराहरू निरर्थक हुन्‍छन्‌। धर्मी मानिस सङ्कष्‍टबाट बचाइन्‍छ, अनि त्‍यसको साटो दुष्‍टमाथि नै त्‍यो आइपर्छ। ईश्‍वरहीनको आफ्‍नै मुखले आफ्‍नो छिमेकीको बरबादी गर्छ, तर ज्ञानले धर्मीलाई छुटकारा मिल्‍छ। जब धर्मीको उन्‍नति हुन्‍छ, तब सहरै आनन्‍दित हुन्‍छ। जब दुष्‍टको नाश हुन्‍छ, तब रमाहट हुन्‍छ। धर्मात्‍माको आशीर्वादले सहरको उन्‍नति हुन्‍छ, तर दुष्‍टहरूको मुखले त्‍यसको भताभुङ्ग हुन्‍छ। समझ नभएको मानिसले आफ्‍नो छिमेकीको खिल्‍ली उड़ाउँछ, तर समझदार मानिसले आफ्‍नो जिब्रोमा लगाम लगाउँछ। कुरौटेले गोप्‍य भरोसामा आघात पुर्‍याउँछ, तर विश्‍वसनीय मानिसले कुरा गुप्‍तमै राख्‍छ। पथप्रदर्शनको अभावले देशको पतन हुन्‍छ, तर धेरै सल्‍लाहकारहरूको कारण विजय निश्‍चित हुन्‍छ। अरूहरूको जमानी बस्‍नेले निश्‍चय नै नोक्‍सानी भोग्‍नुपर्नेछ, तर अर्काको नासोमा हात हाल्‍न इन्‍कार गर्ने व्‍यक्ति सुरक्षित रहनेछ। दयालु स्‍त्रीले आदर पाउँछिन्, तर निर्दयी मानिसले केवल सम्‍पत्ति कमाउँछ। दयालु हुनाले मानिसको आफ्‍नै हित हुन्‍छ, तर निर्दयी मानिसले आफैमाथि सङ्कष्‍ट ल्‍याउँछ। दुष्‍ट मानिसले ठगाइको ज्‍याला कमाउँछ, तर जसले धार्मिकता छर्छ, उसले निश्‍चित इनाम कटनी गर्छ। साँच्‍चैको धार्मिक मानिसले जीवन पाउँछ, तर दुष्‍टताको पछि लाग्‍ने मानिस मृत्‍युमा पर्छ। कुटिल हृदय भएको मानिसलाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्‍छ, तर तिनीहरूसँग उहाँ प्रसन्‍न हुनुहुन्‍छ, जसका चालहरू निर्दोष छन्‌। यो कुरा निश्‍चित छ: दुष्‍टहरू दण्‍डविना उम्‍कनेछैनन्, तर धर्मीहरूले छुटकारा पाउनेछन्‌। सुँगुरको नाकमा सुनको नत्‍थ भएझैँ एक विवेकहीन सुन्‍दरी स्‍त्री पनि हो। धर्मात्‍माका इच्‍छाको अन्‍त्‍य केवल असलै हुन्‍छ, तर दुष्‍टका आशाको अन्‍त केवल क्रोधमा हुन्‍छ। कोही मानिसले उदार हातले दिन्‍छ र अझ बढ़ी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्‍ने पनि दिँदैन, र दरिद्रतामा पर्छ। उदार मानिसको फलिफाप हुन्‍छ, अरूलाई उत्‍साह दिने व्‍यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्‍साह प्राप्‍त गर्नेछ। अन्‍न लुकाएर भण्‍डार भर्नेलाई मानिसहरूले सराप्‍छन्, तर स्‍वेच्‍छाले बिक्री गर्ने व्‍यक्ति आशिष्‌ले भरपूर हुनेछ। जसले भलाइको खोजी गर्छ, उसले सद्‌भाव पाउँछ, तर खराबीको खोजी गर्नेमाथि खराबी नै आइलाग्‍छ।
 तब एलीपज तेमानीले जवाफ दिए: “के बुद्धि भएको मानिसले यस्‍ता खोक्रो विचारयुक्त उत्तर दिन्‍छ? अथवा आफ्‍नो पेटमा पूर्वी बतास रहन्‍छ? के उहाँले यस्‍ता बेकामका कुराहरू, मूल्‍य नभएका शब्‍दहरूद्वारा बहस गर्नुहुन्‍छ? तर तपाईं ता मानिसहरूलाई परमेश्‍वरको भय मान्‍नलाई बाधा दिनुहुन्‍छ, र परमेश्‍वरप्रतिको भक्तिमा क्षति पुर्‍याउनुहुन्‍छ। तपाईं जे भन्‍नुहुन्‍छ त्‍यो त तपाईंको अधर्मले नै भन्‍न लाउँछ अनि छलको भाषा तपाईं रुचाउनुहुन्‍छ। तपाईं आफ्‍नै कुराबाट दोषी ठहरिनुभएको छ, मबाट त होइन। तपाईंको आफ्‍नै ओठले तपाईंको विरुद्धमा साक्षी दिन्‍छ। के तपाईं मानिस जातिमा सबैभन्‍दा पहिले जन्‍मनुभएको हो? के तपाईंको उत्‍पत्ति डाँड़ाहरूभन्‍दा पहिले भएको हो? के तपाईं परमेश्‍वरको गुप्‍त सभामा बसेर सुन्‍नुहुन्‍छ? अथवा सबै बुद्धिका कुरा तपाईं आफ्‍नै मात्र बनाउनुहुन्‍छ? हामीले नजानेका कुन कुरा तपाईं जान्‍नुहुन्‍छ? हामीमा नभएको अन्‍तर्ज्ञान तपाईंमा के छ? हाम्रा बीचमा वृद्ध र पाका मानिसहरू छन्, तपाईंका पिताभन्‍दा पनि वृद्ध मानिस हाम्रा साथमा छन्‌। तपाईंको कानमा बिस्‍तारै परेको मधुरो शब्‍द, परमेश्‍वरको सान्‍त्‍वना के तपाईंको निम्‍ति यथेष्‍ट छैन? केले तपाईंको हृदयमा यस्‍तो आँट दिन्‍छ? अनि तपाईं किन आफ्‍नो आँखा फुकाएर हेर्नुहुन्‍छ? र तपाईं आफ्‍नो रीस परमेश्‍वरलाई पोखाउनुहुन्‍छ, अनि आफ्‍ना मुखबाट यस्‍ता शब्‍दको भल निकाल्‍नुहुन्‍छ? “निर्बल मानिस के हो र त्‍यो निर्दोष हुन सक्‍छ? अथवा स्‍त्रीबाट जन्‍मेको कुनै बालक, के त्‍यो धर्मी ठहरिन सक्‍छ? परमेश्‍वरले आफ्‍नै पवित्र जनमाथि भरोसा राख्‍नुहुन्‍न र स्‍वर्ग नै उहाँको दृष्‍टिमा निर्दोष छैन भने, मानिस त झन्‌ कति कम होला, जो घिनलाग्‍दो र सड़ेको हुन्‍छ, र जसले अधर्मलाई पानीझैँ पिउँदछ! सुन्‍नुहोस्‌ र तपाईंलाई म बताउनेछु, र मैले देखेको कुरा म बयान गर्नेछु। जुन कुरा ज्ञानीहरूले आफ्‍ना पुर्खाहरूबाट पाएको केही नलुकाईकन घोषणा गरेका छन्‌। (उनीहरूलाई मात्र देश अधिकार गर्न दिइएको थियो, उनीहरूसँग कुनै विदेशी बसेका थिएनन्‌।) दुष्‍ट आफ्‍नो जीवनकालभरि नै दु:खले सताइएको हुन्‍छ, निष्‍ठुर मानिसका वर्षहरू गनेर तोकिएका हुन्‍छन्‌। त्रासको शब्‍द त्‍यसको कानमा गुञ्‍जिरहन्‍छ, शान्‍तिको समयमा पनि नाश गर्ने त्‍यसमाथि आइलाग्‍नेछ। अन्‍धकारको मुखबाट त्‍यसले उम्‍कने आशा गर्न सक्‍दैन, तरवारले मारिन त्‍यो छानिएको छ। गिद्धको लागि आहारा फ्याँकिएझैँ त्‍यो फ्याँकिन्‍छ, आफ्‍नो विनाश निश्‍चय नै आउँछ भनी त्‍यस्‍तो मानिसले जान्‍दछ। दु:ख र सुर्ताले त्‍यसलाई त्रसित बनाउँछ, युद्ध गर्न तयार भएका राजाझैँ तिनीहरूले त्‍यसलाई व्‍याकुल पार्छन्‌। किनभने त्‍यसले परमेश्‍वरको विरुद्धमा आफ्‍नो हात उठाएको छ, र सर्वशक्तिमान्‌को विरुद्धमा जोरी खोजेको छ। आफ्‍नो बाक्‍लो र विशाल ढाल लिएर परमेश्‍वरको विरुद्धमा आक्रमण गर्न त्‍यो जाइलाग्‍छ। “त्‍यसको गाला चिल्‍लोले भरिएको र त्‍यसको कम्‍मर बोसोले भरिएको भए तापनि त्‍यो नाश भएको सहर र घरमा बस्‍नेछ, जहाँ कोही बस्‍दैनन्, ती घरहरू जो भत्‍केर ढुङ्गाको थुप्रो हुनेछन्‌। त्‍यो अब उप्रान्‍त धनी हुनेछैन, र उसको सम्‍पत्ति रहनेछैन। न त उसको सम्‍पत्ति जमिनमा फैलिनेछ। अन्‍धकारबाट ऊ उम्‍कन सक्‍नेछैन, ज्‍वालाले त्‍यसका टुसाहरू चाउरिनेछन्, अनि परमेश्‍वरको सासले त्‍यसलाई उड़ाएर लैजानेछ। बेकामका कुराहरूमाथि भरोसा गरेर त्‍यसले आफैलाई धोका नदेओस्, किनभने त्‍यसले सट्टामा केही पाउनेछैन। उसको समयभन्‍दा पहिले नै उसलाई पूर्ण रूपले चुक्‍ता गरिनेछ, अनि उसका हाँगाहरू सप्रने छैनन्‌। काँचैमा फल टिपिएका अंगूरका बोटजस्‍तै त्‍यो हुनेछ, फूलहरू झरेको भद्राक्षको बोटझैँ त्‍यो हुनेछ। किनभने ईश्‍वरहीनहरूको समूह सबै बाँझो हुनेछ, घूस मन पराउनेहरूका पालहरू आगोले नष्‍ट हुनेछन्‌। तिनीहरू कष्‍ट गर्भ धारण गर्दछन्, र खराबी जन्‍माउँछन्, तिनीहरूका गर्भहरूले छल रच्‍दछन्‌।”
Nepali Bible (NNRV) 2012
Scripture Text © Nepal Bible Society 1997, 2006, 2009, 2012